“Aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan qeyb ka ahay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican aduunka”… Lacazette – Gool FM
(Arsenal) 03 Sab 2018. Weeraryahanka kooxda Arsenal Alexandre Lacazette ayaa sheegay in dhamaan ciyaartoyda Gunners ay sida caruurta oo kale wax kaga bartaan tababare Unai Emery.
Kooxda reer London ee Arsenal ayaa labadii kulan lasoo dhaafay ay ka ciyaartay horyaalka Premier League ka gaartay guul, waxayna kasoo kabatay qaab ciyaareedkii xumaa ay kaga bilaawdeen xili ciyaareedkan.
“Waxaan ka baranaa waxyaabo badan, taakiin tababare Unai Emery wuxuu inoo sheegaa inay inaga dhalan doonaan goolal badan”.
“Waxaan sameyneynaa qaladaad sababtoo ah waxaan wax kaga bareeneynaa macalinka sida caruurta oo kale, sidaas darteed wax dhibaata ah malahan, waa isbuuc kaloo aad u fiican”.
“Kooxda haatan aad ayay u fiican tahay, kadib laba guuldarooyin ay kala soo kulantay kooxaha Man City iyo Chelsea oo kusoo kala guuleestay Premier League labadii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay, waxaa suuragal ah in dhamaan dadka ay ku raaxeysanayaan haatan daawashadeena”.
“Xilli ciyaareedkan waxaan dooneynaa inaan ku fiicnaano kulamada banaanka aan ku ciyaari doono”.
“Waxaan u shaqeenayaa si wanaagsan, waxaana u qalmaa inaan ka mid noqdo kooxda, aad ayaan u faraxsanahay, sababtoo ah waxaan ka mid ahay mid ka mid ah kooxaha ugu fiican aduunka”.
RASMI: kooxda Liverpool oo heshiiska cusub ka saxiixatay Jordan Henderson